Iindaba -Izinto ezizenzekelayo ngokupheleleyo zeFayibha Laser Tube Ukusika Umatshini weSisombululo ngombhobho woMlilo eKorea
Ngokupheleleyo oluzenzekelayo Fiber Laser Tube Cutting Machine Solution For Fire lwemibhobho In Korea
Ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo Ifayibha Laser Tube Ukucanda Umatshini weSisombululo ngombhobho woMlilo eKorea
Ngenxa yokunyusa kulwakhiwo izixeko smart kwiindawo ngeendawo, ukhuseleko emlilweni zemveli ayikwazi ukuhlangabezana neemfuno zokukhusela umlilo emizini smart, kunye nokhuseleko emlilweni okrelekrele esebenzisa ngokupheleleyo intanethi izinto zobuchwepheshe ukuhlangabezana "isilawuli esizisebenzelayo" iimfuno yothintelo lomlilo kunye nolawulo luyavela. Ukwakhiwa ukhuseleko smart lomlilo ifumene ingqalelo enkulu kunye nenkxaso evela kwilizwe alubonisayo kunye namasebe.
ukwakhiwa ukhuseleko umli- lo wonke. Kuba ukwakhiwa izixeko smart, ukwakhiwa ukhuseleko lomlilo yiprayorithi top. ukwakha njani inkqubo ukhuseleko emlilweni ezikrelekrele ukwenza kulingane uphuhliso izixeko smart yingxaki abaphathi sixeko kufuneka ingqalelo.
Njengoko sonke siyazi thina, nokuba lushishino yokhuseleko emlilweni smart okanye ishishini ukhuseleko emlilweni yemveli, eli candelo sibaluleke kakhulu yonke le nkqubo yokhuseleko emlilweni yi yombhobho zokukhusela umlilo.
Iimfuneko Customer: Laser ekuphawuleni nokusika kwi kwimibhobho.
Isisombululo sethu: Yongeza inkqubo yokumakisha kwisilayishi esizenzekelayo sokugcwalisa ukumakisha kwimibhobho ngaphambi kokusika.
Ekubeni yombhobho yokhuseleko emlilweni kusoloko static karhulumente, iimfuno yombhobho ingqongqo, kwaye neemfuno yombhobho ukumelana nengcinezelo, nokumelana kunye nokumelana eliphezulu lobushushu. Ngokuqhelekileyo izinto pipe umlilo ezisetyenziswayo zezi: umbhobho spheroidal unikezelo lwamanzi kwesinyithi, umbhobho zobhedu, umbhobho steel stainless, ingxubevange nelembande, slotted, ngamanqindi njl
P2060A i izixhobo professional ukusika imibhobho. Uthe wagawulwa ngexesha elinye kwaye unezinga eliphezulu esizisebenzelayo, nto leyo iphucula kakhulu ngendlela yemveliso.
Kulo nemililo into, umlilo ezininzi ezingundoqo zokucima uncedo inkqubo zokuchela mlilo kufuneka wakhiwe pipe pre-lamanga, edibeneyo bhetyebhetye, welding izixhobo lokuphuma kunye nentloko zokuchela, kwaye ngokulungelelanisiweyo idibene ukusika, Ukuhlukunyezwa kunye ukuwelda ukwenza umsebenzi walo wokuqala.
P2060A laser oluzenzekelayo pipe ukusika Umatshini sisiqalo sesiphelo-high laser ukusika ityhubhu izixhobo ezizodwa. Kulula ukusebenza, kakhulu nokuhambisa, ukusika ngqo kakhulu, aze alungelelaniselwe iimfuno omkhulu kwimveliso mveliso kunye nezinye iimpawu ezininzi ephambili, waba ukhetho yokuqala ishishini elihambisayo izixhobo ityhubhu. Imveliso iye serialized ukuhlangabezana iintlobo ukusika kunye ukothula ezibude kunye neemfuno nangokukrola ngenxa ngobubanzi umbhobho ezahlukeneyo, ngaloo ndlela inkonzo wena kubasebenzisi abangakumbi entsimini zokukhusela umlilo.
Le metal laser umbhobho mgawuli unokwenza izibuko ukusika kunye ukusika umbhobho umphezulu kwi imibhobho yesinyithi. It usike ngqo iityhubhu umjikelo ngemibhobho yentsimbi, iityhubhu zobhedu, iityhubhu aluminiyamu, intsimbi engatyiwa iityhubhu mveliso, njl .; ngeenxa zonke tube groove ukusika, ngeenxa zonke ityhubhu slotting, ngeenxa zonke ityhubhu Ukuhlukunyezwa, ngeenxa zonke ipatheni tube cutting njl
Golden Vtop Pipe Laser umsiki P2060A Iimpawu
Golden Laser tube ukusika umatshini iye yasungulwa ngo-2012, ngoDisemba 2013 onesethi yokuqala yamaxwebhu YAG ityhubhu ukusika umatshini wathengiswa. Ngo-2014, umatshini ityhubhu ukusika ebengene ishishini ukufaneleka / lokuzilolonga. Ngowe-2015, abantu abaninzi ifayibha laser ityhubhu ukusika oomatshini yaveliswa ze isetyenziswe mveliso eyahlukeneyo. Kwaye ngoku sihlala ziyaphucuka kwaye nokuphucula intsebenzo ityhubhu ukuzilimaza umatshini.
P2060A 3000w Machine Technical Iparameters
Tube / Pipe uhlobo ngeenxa zonke, isikwere, eziziingxande, okweqanda, OB-uhlobo, D-uhlobo, Triangle, etc;
Tube / Pipe uhlobo angle steel, ijelo sentsimbi, H-imilo sentsimbi, L-imilo intsimbi, intsimbi band, etc (ngokuba ukhetho)
Tube / ubude Pipe max 6m
Tube / ubukhulu Pipe Φ20mm-200mm
Tube / Pipe iyalayisha ubunzima Max 25kg / m
ubukhulu bundle Max 800mm * 800mm * 6000mm
weight bundle max 2500kg
Phinda isikhundla accuracy + 0.03mm
Indawo accuracy + 0.05mm
Fiber laser umthombo 3000W
speed Indawo 90m max / min
Chuck isantya Jikelezisa Max 105r / min
Ukukhawuleziswa Sika 1F
supply amandla Electric AC380V 60Hz 3P
Inani lilonke amandla 32KW
P2060A Machine Cutting iisampuli ezingama Imiboniso
P2060A Machine In The Korea yoMthengi Factory
P2060A Machine Kuba Cutting Fire lwemibhobho Demo Video